St. Kitts & Nevis inobvumira bvunzo yeAntigen yevafambi vanoenda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau » St. Kitts & Nevis inobvumira bvunzo yeAntigen yevafambi vanoenda
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
St. Kitts & Nevis inobvumira bvunzo yeAntigen yevafambi vanoenda.
Mabhazi anotenderwa panguva ino ndeaya: The Joseph N. France Laboratory; Inotevera Gen Laboratory; Avalon Laboratory uye Hunhu Diagnostics.
Antigen bvunzo yaizopihwa kune vafambi vemhepo vanobuda vane nyika dzinobvuma kuyedzwa nekukurumidza pavanodzoka kubva kunzvimbo dzekunze.
Iyo Federation yabvisa iyo yekubuda yekuyedza inodikanwa kune vafambi vane nyika dzekutangira dzisingade kudzoka kuyedzwa.
Bvunzo dzekubuda dzinozotorwa kune vashanyi "Yekutendera Yakatenderwa" hotera kana pekugara chete nebazi rezvehutano rakabvumidzwa nyanzvi yehutano.
Kitts & Nevis vakazivisa nezuro, Gumiguru 20, 2021, kuti bvunzo yeAntigen ichapihwa vafambi vemhepo vanobuda munyika avo nyika dzinobvuma kuyedzwa nekukurumidza pavanodzoka kubva kunzvimbo dzekunze. Iyo Federation yabvisa iyo yekubuda yekuyedza inodikanwa kune vafambi vane nyika dzekutangira dzisingade kudzoka kuyedzwa.
Miedzo yekubuda ichatorwa kune vashanyi "Yekutenderwa Yakatenderwa" hotera kana pekugara chete nebazi rezvehutano rakabvumidzwa nyanzvi yehutano maawa 48 - 72 maawa asati asimuka, nemasampuli akaedzwa mune rakabvumirwa labhu yemuno. Kurongwa kwemuyedzo kunofanirwa kuve kuburikidza nehotera concierge kune iwo akanangana ne "Kufamba Akatenderwa" mahotera; vafambi vanogara mudzimba, condos uye / kana dzimba dzevamwe vanokurudzirwa kuti vabate COVID-19 taskforce hotline 311 kana [email inodzivirirwa] kuronga bvunzo yavo. Ndokumbira utarise kuti bvunzo dziri pamutengo wemufambi nemutengo uri pakati peUS $ 50.00 uye USD 55.00.
Yekupinda mukupinda muFederal ye St. Kitts & Nevis, maProtocol ese Ekufamba uye Zvinodiwa zvinoramba zviripo, kusanganisira kuendesa mhinduro dzisina kunaka kubva kuRT PCR bvunzo maawa makumi maviri nemaviri asati asvika.
Vashanyi vanoyeuchidzwa kugara vachiongorora St. Kitts Tourism Authority uye Nevis Tourism Chiremera mawebhusaiti ekuvandudza uye neruzivo.